Sary nindramina Canal +, sy teny amin'ny tranokala samihafa teny
Io tany miodina amin'ny tenany toa ny tandrimo io, dia mbola miodina mandeha manodidina ny masoandro ihany koa. 365 andro mahery kely izy no mahavita izay fihodidinana manodidina ny masoandro izay.
Ity tanintsika ity anefa dia misy ny volana, miodina eo aminy ary manaraka azy entiny manodidina ny masoandro ihany koa.
Mahavita 30 andro (izay no antsoina hoe iray volana) ny fihodinan'io volana io manodidina ny tany. Miovaova izy 28andro, 29 andro bissextile, 30 andro, 31 andro, satria ny tany dia somary manao baolina lavalava, ka rehefa ery amin'ny tendrony lavitra kokoa dia ela kokoa izany vao vita ny fiodinana.
Ny volana izany dia antsoina hoe satelitan'ny tany, satria dia tsy misaraka aminy, fa miodina, entiny manaraka azy miodina ny masoandro.
Ny tany izany dia satelitan'ny masoandro, satria dia tsy misaraka aminy fa dia miodina manodidina azy eo foana.
Io tranga io izany no nahatonga ireo manam-pahaiznaa andinika ny hoe, raha misy bolongan-javatra lehibe izany omena hafangainam-pandeha sy lalana, na trajectoire ka ahodina amin'ny tany dia anaraka ny tany, hiodina anodidina azy, na hijanona tsy hiala aminy, anaraka izay alehany manodidina ny masoandro.
Izany dia noho ny herin'ny tany misintona azy, nefa koa izy tsy hilatsaka satria efa nalefa amin'ny lalana tsy ampihetsika azy fa dia manaraka eny hatrany, tsy mila solika na motera mampandeha azy, fa dia hery mifandanja dia manaraka mandrakizay eny, raha tsy hoe iniana simbaina na mifandona amin'ny zavatra hafa.
Io izany ilay antsoina hoe Satellite.
2- Manahoana ilay satellite mitondra sary sy feo ho an'ny televizionina
Misy karazany maro ny satellite, fa ny ilaintsika eto, dia ireo satellite mampita ny sary sy feo amin'ireny televizionina ireny, na Canal+ io na hafa.
Izany hoe ny station télé avy aty amin'ny tany izany, mandefa onde na taratra miakatra eny amin'ny satellite na zanabolana, dia izy indray no mamerina izany midina ety an-tany raisin'ireny parabole isan-trano ireny.
Satria raha eny amin'ny pilonne Andafiavaratra, akaikin'ny Rova, ohatra izany no avy dia atodika aty amin'ny tranontsika, dia ho takon'ny tendrombohitra ilay onde na ilay taratra, fa raha akarina eny ambony lavitra eny, ka ny eny no mamerina ny taratra midina, dia samy mahazo ilay sary sy feo, na ny ao andrefan'ilay tendrombohitra, na ny atsinanana, na ny atsimo na ny avaratra.
Eto izany tsy ireny antenne râteau ireny no miasa fa ireo sahafa boribory ihany.
3- Inona ny satellite na zanabolana mitondra ny Canal +
Ny zanabolana Eutelsat 16A, na Eutelsat W3C no anarany teo aloha, no manaparitaka ny sary sy feo aty amin'ny ranomasim-be indianina. Misy satellite marobe ihany koa fa io no alalinintsika.
Io no antsoina hoe satellite géostationnaire, na zanabolana tsy mihetsika izy io mihoatra amin'ny tany, fa miara-miodina aminy izay alehan'ny tany eo. Any amin'ny 36 000km (35 981 km) miala ny tany no misy azy, na ny ceinture de Clark. Misy ilan'ny tany izany tazany sy mahatazana azy, fa misy kosa no takona izy. Mipetraka eo ambonin'ny tsipiky ny équateur ireo zanabolana ireo.
Isika aty Madagasikara, izany dia
"Bandes Ku" 10,7 - 12,75 GHz ny fréquence alaintsika. Ka sahafa 50-60cm eo izany ny savaivony no mahazo azy.
3- Inona ireo fitaovana ilaina vao mahazo sary sy feo
a - Parabole na sahafa
Ilay onde na taratra izany alefa'ny satellite, misy ireo onde tsy andoavam-bola betsaka, misy kosa no crypté, na mila décodeur, na famadihana ilay onde ho azo vakian'ny télé.
Raha tsorina izany, dia ny rehetra afaka maka io onde io, fa misy no azo vakiana avy hatrany, misy kosa mila mandoa vola arakaraky ny abonnement vao mahita azy.
Toy ireny tanora mampiasa teny tsy fantatra, asiandreo tsofoka anarana anaty fehezan-teny ka raha tsy mahay ilay code izany dia naman'ny tsy misy azo ny resany.
Mila ilay sahafa izany anangona ilay onde, mazava ho azy fa tsy maintsy mifanatrika amin'ilay satellite izany io sahafa io, tsy voatery atao eny ambony tafo, na avo toerana toy ny antenne râteau izy, fa na atao amin'ny tany na toerana iva dia mety. Tsara izany izy atao eo amin'ny 1.90m eo, na akaikin'ny toerana mora hi régler na azy.
Tsy atao misy rindrina na trano, na hazo manakona azy sy ny zana-bolana.
Midika izany fa azo atraka na ahondrika izany ilay sahafa, iny no angle "élévation" na orientation verticale. Hita amin'ny niveau na rapporteur io.
Azo ahodina miankavia na miankavanana ihany koa ilay sahafa, iny no "Azimuth" na orientation horizontale. Hita amin'ny boussole io.
b- Tête de réception na LNB (Low Noise Block converter)
Ny sahafa manangona ilay onde fotsiny no asany, fa misy lohany manatrika ilay sahafa iny, no tena antenne, maka ireo onde na taratra ireo mitarika azy amin'ny câble co-axiale, na fil misy fil hafa anatiny, mandeha any amin'ilay décodeur mamadika azy ho sary azo jerena, dia izay ilay décodeur vao asiana câble hafa na HDMI andeha any amin'ny télé ho jerena ny sary sy ahenoana ny feo.
Io Tête de réception io dia misy angle fametrahana azy koa na "polarisation", izany hoe ny fitodik'io lohany io any amin'ny satellite, io no ahitana ny réglage madinika na manify na finition. Iretsy ambony, miodrika na mitraka, ankavia na havanana mitodika amin'ny ankapobeny any avaratra andrefana raha ny eto Madagasikara.
d- Câble antenne
Ny mila ho fantatra, arakaraky ny hatsaran'ny câble no atsaran'ny sary entiny, satria misy very andalana ny sary, ka dia ho feno kiaka toy ireny cd voakika ireny koa ny sary. Arakaraky ny mahalavitra ny ametrahana ny parabole ihany koa izany no mahalava ny câble, sy mahabetsaka very ny sary, ka mampihena ny atsarany.
Misy karazany izany ny câble
Ohatra: câble coaxial 17VATC et 19VATC
- Ilay tarehimarika roa voalohany 17 na 19 dia milaza ny fa very 17dB isaky ny 100m ny hatsaran'ny sary entin'io câble io, ary 19db ny an'ilay iray. Izany hoe ilay 17 io izany no ampiasaina raha lavitra kokoa ny toerana misy ilay sahafa vao tonga aty amin'ny décodeur sy télé.
- Ilay V midika hoe PVC ny gaine na ilay fonony, fotsy foana ny lokon'io, fampiasa an-trano io na dia misy manao azy an-tokotany aza.
P kosa raha Polyéthylène, mainty foana ny lokony, fampiasa an-tokotany.
A: Aluminium no ao anatiny, R: Cuivre na varahina
TC: Tin Copper, ny endrik'ilay randrana fil mifono ilay anatiny iny.
4- Ahoana ny montage sy réglage parabole
- Ampangalao toerana mitodika mianavaratra somary andrefana ary aloha ilay sahafa, jereo izay fitodiky ny hafa akaiky raha misy.
- Ajoroy mijaridina maka niveau 90° ilay tube tahony iny.
- Matetika efa misy graduation ilay sahafa sy ny kojakoaja aminy iny.
- Raha Antananarivo izao dia:
Elévation (mitraka miondrika): 50° eo
Azimuth: - 44°
Angle polarisation: - 54°
Ny mora indrindra dia apetao avokoa aloha ny fil rehetra hatramin'ny télé, dia alefaso ny décodeur sy télé, mila namana raha tsy mahatazana ilay télé ilay mpanao réglage raha tsy manana fitaovana fanaovana réglage.
- Arakarak'ilay décodeur, fa omena ohatra ihany isika.
Alaivo ny télécommande décodeur Canal
MATV = ok
Réglages décodeur = OK
Pointage Antenne = OK
Aza misy kasihina fa jereo fotsiny misy
Tokony ho maitso ny lokony raha ambonin'ny 30% ireo.
Manomboka eo dia mitady chaîne aloha na bouquet.
Ny Qualité signal no tena ilaina, hiakatra ambonin'ny 60%.
Atrakao na ampidino aloha ny sahafa ahazo ilay angle teo, tsy mitraka be nefa tsy miondrika be. Ahodony miankavia, miankavanana arak'ilay angle efa nomena tetsy aloha, atodika mianavaratra mahazo atsinanana.
Rehefa manomboka mihamaitso sy miakatra farany ambony ny Qualité signal, dia somary serrer-o kely ny boulon fixation.
Raha tsy mahazo maitso mihitsy, dia ahondreo kely ilay sahafa, na atraka kely, atao tsikelikely (pas de 1°), dia haverina ahodina miankavia miankavanana indray, atao moramora.
Rehefa mahazo maitso tsara, dia somary takonana amin'ny tanana, tsy misy courant mety andratra io, signal no ao amin'ilay Tête de réception na LNB iny. Tokony tsy misy signal tonga ary lasa zero ny ery amin'ny télé, iny no test ahitana fa mandeha tsara ny tête de réception LNB.
Amahao ilay fixation LNB, dia ahodony moramora miankavia mandrampahatongan'ny signal tsy hita ery amin'ny télé, asio marika. Avereno ahodina miankavanana indray, mandram-pahavery ny signal indray, asio marika. Eo afovoan'ireo marika roa ireo izany no tokony hisy ny hitsin'io Tête de réception io.
Fixer tsara daholo amin'izay, dia samia manaraka izay fandaharana tiany sy naloany vola.
Tsy ilaina ny manisy tavoahangy plastique na capote na sachet ilay lohany na LNB iny, fa vao maika aza manaratsy ny signal voaray, efa natao ahazaka orana iny lohany iny. Raha tsy mahazo signal izy amin'ny andro avy orana na ratsy ny andro, dia na ny réglage no ratsy, na kely loatra ny habehan'ny sahafa.
(Sary nindramina Canal +, sy teny amin'ny tranokala samihafa teny)